यो हप्ता एउटा अधुरो सपनाले तपाईलाई लामो समय विचलित गर्न सक्छ । उद्येश्य पूर्णताको लागी केहि समय धैर्य गर्नु आवस्यक रहन्छ । हप्ता तपाईको लागि मध्यम रहेको छ । आफ्नो विकासको लागि दुबै सामाजिक र व्यावसायिक स्तरमा सम्भव रहने छ। व्यापारको क्षेत्रमा राम्रो सम्झौता गर्न सक्नुहुन्छ । साझेदारी कामहरुमा लाभ उठाउन सक्नुहुन्छ । सुनमा लगानी गर्ने विचार सही रहेनछ । अपेक्षित आशाहरु स्थिर छन् । रोकिएको रकम प्राप्तिले आर्थिक मजबुत पार्नेछ । बुधवार स्वास्थमा खराबी आउन सक्ने योग रहेको छ ।
यो हप्ता आफ्नो उद्देश्यको लागी एक कदम बढि आउने आशा गर्न सकिन्छ । घरेलू स्तरमा सबै चीजहरू मिलाउन सकिन्छ । उत्तम समय नहुन सक्छ । तपाई परिवारमा कुनै पनि घटनाको लागी जिम्मेवारी लिन सक्ने विश्वास राख्नुहुन्छ, अरुलाई निराश गर्न चाहनुहुन्न । अध्ययनकोक्षेत्रमा सामान्य प्रदर्शन हुने संकेत छन् । पेशेवरस्तरमा वरिष्ठहरुलाई प्रभाव पार्ने प्रयासहरू सफल हुनेछन् । आर्थिक स्तरमा राम्रो स्थितिमा कामहरु रहनेछ । तपाइका बच्चाहरूले तपाइलाई केहि राम्रो समाचार ल्याउन सक्छन् । भावनात्मक सम्बन्धका लागि यो हप्ता राम्रो समय हुनेछ । तपाईको कल्पनाशक्तिको सुदृढीकरणमा ब्रिधि रहनेछ । नयाँ विचारहरू हजुरमा जन्म लिनेछन् ।
आफ्नो दिमागमा राख्नु भएको कुरा प्राप्त गर्नको लागि तपाईले आफ्नो कार्यतरिका परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ । अध्ययनमा निरन्तर सफलताको संकेतहरू छन् । व्यावसायिक क्षेत्रमा उपलब्धिका अवसरहरु छन् । प्रेमीसंग बलियो पारस्परिक सम्बन्धको कारण सम्बन्ध बलियो हुँदै जानेछ । नचाहिदो गफमा भुलिन सकिन्छ । परिवारमा कुनै सदस्यको अचानक आगमनले परिवारमा खुशीको वातावरण सिर्जना गर्दछ । स्वास्थ्य सन्तोषजनक हुने आशा गरिन्छ । सप्ताहान्त राम्रै नै बित्ला ।
यस हप्ता महिला सदस्यसंग विवाद रहन सक्छ । अध्ययन सम्बन्धित र अध्यापनको क्षेत्रमा निरन्तर सफलताको लागि अवसरहरूपूर्ण हुनेछन् । आफ्नो दिमाग र विचारहरूको सदुपयोगले साता राम्रो नै रहला । निजी र सरकारी क्षेत्रहरुमा कार्यमा सुष्टता आउन सक्नेछ । स्वास्थ्य स्वस्थ रहनेछ । उचित समयमा काम पुरा हुदा मन खुशी हुनेछ । व्यवसायको बृद्धिका सम्बन्धमा गरिएका प्रयासहरूको सफलताको सम्भावना यस हप्ता पनि जारी रहनेछ । हप्ताको बीचमा व्यापार सम्बन्धित उत्पादन र बिक्री लक्ष्यहरूमा पुग्न राम्रो प्रगति हुनेछ । यो हप्ता प्रेम सम्बन्धमा पार्टनरहरुको बीचमा राम्रो लगाव रहनेछ । कुनै प्रतिस्पर्धीले बुधबार दुख दिन सक्नेछन् ।
यस हप्ता सिंह राशिका जातकहरुको व्यवसायलाई गति दिन र काम सम्पन्न गर्ने अभियानमा लाग्नेछन् । यस हप्ताको ग्रहगत परिवर्तनले इच्छित कार्य सम्पादन हुनेछ र शुभ परिणामहरूले पूर्णता पाउनेछ । केहि मुद्दाहरुमा कानुनी बाधा आउन सक्लान त्यसैले आवश्यक सावधानी अपनाउन रोकिनु हुँदैन । हप्ताको बीचमा कुनै पनि राजनीतिक र सामाजिक मामिलामा सफल हुने अवसर रहनेछ । अनुभवी व्यक्तिहरुसंग सम्बन्ध कमजोर नपार्नुहोस् अन्यथा तपाई इच्छित लक्ष्यहरूसहित पछाडि जान सक्नुहुन्छ यद्यपि पैसा कमाउने अभिप्राय हप्ताको तेस्रो भागमा जारी रहनेछ । जसको कारण काम र व्यवसाय माथि उठाइन्छ । यदि हजुर प्रेम सम्बन्धमा हुनुहुन्छ भने मिठासको राज्य यस हप्ता रहनेछ । हप्ताको अन्तिम भागमा फेरि स्वास्थ्य समस्या र पैसा खर्च हुनेछ ।
यो हप्ता आफुमा अझ ऊर्जा थपिएको महसूस गर्नुहुनेछ । यदि तपाई कलात्मक तरिका र पूराहृदयले कुनै योजना गर्नुभयो भने तपाई निश्चित रूपमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ । तपाई सप्ताहन्तमा एक साहसिक यात्रामा जान सक्नुहुन्छ, तर यसमा सावधान रहनुहोस् र यो हप्ता आफ्नो पोशाकमा पनि ध्यान दिन आवश्यक छ अनास्यक टिका टिप्पणीको सिकार हुनुपर्ला । अनुकूल परिणामहरू पाउन तपाईले कडा परिश्रम गर्नुपर्छ । आफन्तजनको सहयोग प्राप्त नै गर्न सक्नुहुनेछ । राम्रो परिणाम प्राप्त गर्न आफ्नो काममा अधिक ध्यान दिन आवश्यक छ। तपाई हप्ताको बीचमा आराम गर्ने अवसर प्राप्त गर्नुहुनेछ । यात्राको माध्यमबाट लाभहरूको संकेत छ ।
पुरा हप्ता हजुरलाई अध्यात्मले आकर्षित गर्नेछ र तपाईले आफ्नो परमेश्वरलाई सम्झनुहुनेछ । मानिसहरूले तपाईको कामको कदर गर्नेछन् र तपाईको ख्याति समाजमा बढ्नेछ । तपाई शान्त दिमागले राम्रो आर्थिक लाभ पाउन सक्नुहुनेछ । माया गर्नेहरू पूर्ण हप्ताको आनन्द लिन्छन् । तपाईको खर्च बढ्ने सम्भावना छ । यस समयमा तपाईको
आफ्नो कौशल र व्यक्तित्व विकास शीर्षकहरूमा पैसा खर्च गर्नुहुनेछ । तपाईको आत्मविश्वास र कार्य दक्षता सुधार हुनेछ । यो हप्ता तपाईं यात्रा मा जान को लागी लाभदायक हुनेछ ।
हप्ताको सुरूमा भाइबहिनीहरूबाट हुने लाभ र भाइबहिनीहरूलाई पनि फाइदाको संकेतहरू छन् । तपाईको आय निश्चित रूपले वृद्धि हुनेछ । आम्दानीको नयाँ स्रोतहरु उत्पन्न हुनेछ । बच्चाहरूलाई बहुमूल्य सल्लाहको आवस्यकता पर्नेछ । हप्ताको बीचमा तपाईको स्वास्थ्य बिग्रन सक्छ र समय खुशीको लागि उपयुक्त हुदैन । शारीरिक उर्जाको अभावको कारणले तपाईले मानसिक अशान्ति अनुभव गर्नहुनेछ र अत्यन्त निराश हुनुहुनेछ । तपाइ आफ्नो उपलब्धिमा बाधाको कारण मनको आवस्था परिवर्तन को गुनासो गर्न सक्नुहुन्छ। हप्ताका बाँकी दिनहरू तपाईंको व्यक्तित्वको विकास, प्रतिरोधक क्षमता र स्वास्थ्य सुधारको लागि अत्यन्तै शुभ हुनेछ ।
हप्ताको शुरुवात वरिष्ठ अधिकारी र उच्च अधिकारीहरूको पक्षबाट अनुकूल छ । तपाईको शरीर यस समयमा सुधार हुनेछ । काममा प्रारम्भिक प्रगतिको संकेतहरू छन् । वरिष्ठ अधिकारीहरूसँग राम्रो सम्बन्ध कायम रहने छ जसको कारणले तपाईको क्यारियर विकासको लागि लाभदायक साबित हुनेछ । हप्ताको बीचमा तपाईंको व्यवसाय, आम्दानीमा बृद्धि, इच्छाको पूर्ति, खुशी, बच्चाहरू र ठुलो भाईको सम्बन्धमा लाभदायक हुनेछ । यस अवधिमा तपाईको स्वास्थ्य राम्रो हुनेछ । तपाई आफ्नो हृदय संग खुशी हुनेछ। तपाइको उत्साह र दक्षतामा एक उच्चस्तरमा रहनेछ । हप्ताको अन्तमा, तपाईंको काममा अनावश्यक रुकावटहरू हुन सक्छन् र हजुरलाई निराश बनाउनेछ ।
हप्ताको शुरुवात समाजमा प्रतिष्ठा बढाउनको लागि उपयुक्त छ । तपाईले कठिन समयमा व्यक्तिहरूबाट मद्दत प्राप्त गर्नुहुनेछ, यसले तपाईंको प्रतिष्ठा बढाउँदछ । समाजमा तपाईको व्यवहार धेरै राम्रो रहनेछ । तपाईका वरपरका मानिसहरुसंग मायाले कुरा गर्नुहुन्छ । भाइबहिनीहरूको समर्थनले हजुरलाई बलियो हुनमा मद्दत गर्नेछ तर तपाई आफैमा विश्वास गर्नुहुन्छ र सहयोग खोज्न मन पराउनुहुन्न । हप्ताको बीचमा यो संकेत गर्दछ कि त्यहाँ स्थिरसम्पत्तिमा वृद्धि हुनेछ । तपाई आफ्नो पैतृक स्थान, घर र वाहन आदिमा पैसा खर्च गर्नुहुनेछ । केही मानसिक तनावका लक्षणहरू पनि छन् । यदि सम्भव छ भने नयाँ उद्यम सुरु गर्नबाट बच्नुहोस । हप्ताको अन्तिम भागमा तपाई एक धेरै राम्रो सल्लाहकारको रूपमा आफ्नो प्रतिष्ठा स्थापित गर्नुहुनेछ ।
हप्ताको सुरूमा आफ्नो गन्तव्यको लागि आफ्नो सबै उर्जा प्रयोग गर्नुहुनेछ र इच्छित सफलता दिनेछ । तपाई राम्रो गर्नुहुनेछ र तपाई आफैले आत्म- विश्वासलाई बदाउनु हुनेछ । तपाईको आत्मविश्वास, स्वास्थ्य, प्रतिरक्षा, उत्साह र कार्य दक्षता एक उच्च स्तरमा वृद्धि हुनेछ । तपाईको प्रभावशाली व्यक्तित्वका कारणले तपाईलाई धेरैले आदर गर्नेछन् । हप्ताको बीचमा परिवारसँग सम्बन्धित समस्याहरू हुन सक्छन् । तपाई परिवारको शान्ति र आनन्द कायम गर्न सक्दो प्रयास गर्नुहुनेछ । अचानक पैसाको प्रवाहले परिवारका सदस्यहरूबाट इच्छित सम्मान प्राप्त गर्न मद्दत मिल्नेछ । सामाजिक गतिविधि र उद्यमी गतिविधि हप्ताको बाँकी दिनहरूमा रमाइलो हुनेछ । तपाईको कौशल र व्यवस्थापनमा लुकेका प्रतिभाको कदर हुनेछ । तपाईलाई पूर्ण समर्थन मिल्नेछ । नातेदार, मित्र र भाइबहिनी प्रति सत्भाव बढ्नेछ ।
हप्ताको सुरूवातको समय यात्राका लागि अनुकूल हुनेछ ।टाढाको यात्रामा जानु तपाईको लागि लाभदायक हुन्छ । तपाई विभिन्न ठाउँमा सेमिनारहरू र सम्मेलनहरू आयोजना गरेर तपाईंको प्रतिष्ठा बढाउन व्यापक यात्रा गर्नुहुनेछ । गुरुहरूको आशीर्वादका यात्राको लागि लाभदायक रहनेछ । हप्ताको बीचमा नाम र प्रसिद्धि को लागी धेरै शुभ हुनेछ । यस समयमा तपाईको प्रतिष्ठा र सामाजिक स्थिति सुधार हुने बलियो सम्भावना छ। उच्चअधिकारीहरु, वरिष्ठ अधिकारीहरु र सरकारी क्षेत्रहरुबाट सहयोग प्राप्त हुनेछ । हप्ताको अन्तिम भागमा तपाईको आय र व्यवसाय बढ्नेछ । यो हप्ता सरकारको समर्थनबाट नियमित आयलिन सक्नुहुनेछ।
ज्यो.पं. घनश्याम पोख्रेल (९८४१४७९७०७)
साउन १९ गते मंगलबारको राशिफल हेर्नुहोस्
आज आइतबार कुन राशि भएकाहरुको भाग्य कस्तो ? हेर्नुह...
साउन १६ गते शनिबार : हेर्नुहोस् आजको राशिफल
साउन १७ देखि २३ गते सम्म : साप्ताहिक राशिफल हेर्नुहोस्